Taphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi Siitiin injifatan. Li’oneel Messiin ammas abbaa rikoordii haarawaati - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Taphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi Siitiin...
Taphootaa Liigii Shaampiyoonaa Awrooppaa geggeeffameen Arsenaal, Cheelsii, Baarseloonaa, Riyaal Maadriid fi Siitiin injifatan. Li’oneel Messiin ammas abbaa rikoordii haarawaati
Taphoota gareelee adda addaa biyyoota Awurooppaa jiddutti ta’een kanneen ni injifatan jechuun eeggaman injifatan, garuu wonti hineeggamne tokko tokko hin uumamne jechuun hindanda’amu. Taphni qalbii guutuun eeggamee fi hordofame isa Arsenaal Imraatis irratti Brushiyaaa Dortimund woliin geggeesse ture. Arsenaal tapha kana 2 – 0 injifachuudhaan qabxii 10 (sadrkaa 2ffaa) argachuu danda’eera. Liivarpool tapha dirree isaan alatti godheen 2 – 2 bayuu danda’us, ammas waa’een gara marsaa ittii aanuutti dabruu isaa akkuma rarra’etti jira. Tapha har’aa injifachuu dhabuun hiree bareedaa marsaa itti aanuutti dabruu qabu guddaa ufdhabsiiseera. Dabraa moo hindabruu Liivarpool beekuuf tapha itti aanu eeguun dirqama, isaafi nu irrattis.
Taphoota gama birootti geggeeffameen Riyaal Maadriid rikoordii haarawa galmeessise- tapha 15 wolitti aansee injifachuun garee kanaaf rikoordii haarawa. Riyaal Maadriid goolii Ronaaldoon galcheen 1 – 0 Baazel injifatee dirree gadi lakkise. Garee biyya Ispeen kan ta’e Atleetikoo Maadriid 4 – 0 Olompiyaakoos injifate.
Worroota torbaan kana milkaayan keessaa Juveentus isa tokko. Juveen ‘jaartiin dullattiin’ gara Swiidiniitti balali’tee 2 – 0 garee Malmoo dhukkee irraa kaaste. Anderleekt 2 -0 Galaataasaraay rukute. Zeniit tapha dirree isaa irratti taasiseen 1 – 0 Benefikaa geggeesse.
Taphoota kaleessa irratti waan gurguddoo lamatu ta’e. Li’ooneel Messiin rikoordii goolii shaampiyoonaa Awroopaa Raawuliin qabamee ture fooyyessuu isaati, inni jalqabaa. Baarseloonaan 4 – 0 Nikoosiyaa mooyate. Gooliin 3 tan Liyoo turte. Inni lammataa, waa’ee garee Manchaster Siitii fi Cheelsiiti ilaallatu. Manchastar Siitiin goolii 3 Agu’eeroon galcheen garee cimaa Baayer Muniik irratti ol’aantummaa argachuu isaati. Taphichi kuni 3 – 2 raawwate. Cheelsiin ‘Jarreen bubbuleen’ garee Shaalkaa 5 – 0 taphaan ala godhe.
Paaris st.Jerman 3 – 1 garee Aayaaks moo’ate. Roomaan 1 – 1 garee CSKA Moskoon gargar deeme.
taphoota liigii shaampiyoonaa awrooppaa
Previous articleTamsaasa kallattiin ‘International Space Station-ISS’ irraa dabruun ardii daawwatuun danda’ame
Next articleGareen Obboleewwan Muslimoota Masrii hiriira nagaa guddaa waame